Amathoyizi Safe, Organic Teethers, Sweetooth Baby Teether - Melikey
Isethi Yezingane Yezidlo
Indebe yokuphuza yezingane
Imikhiqizo ye-Silicone Teething
Isongo / umgexo / I-Gym yokudlala
Imikhiqizo Teething Yokhuni
Amathoyizi Ezingane Okufundisa
Amasethi Wokondla Izingane
Isitolo esidayisa yonke impahla - Ukwenza ngokwezifiso - i-OEM&ODM
Sineqembu lochwepheshe le-R & D futhi sinikeza isevisi ye-OEM/ODM. Uchwepheshe embonini ye-silicone iminyaka eyi-10+
I-Melikey iwuhlobo lwe- silicone yase-China oludayiswa kakhulu oluphethwe yi-Huizhou Melikey Silicone Product
I-Melikey yaziwa kakhulu nge-silicone baby dinnerware kanye namathoyizi ezingane ayi-silicone.
Kubandakanya ama-silicone baby bibs, izitsha ze-silicone zengane, amapuleti ezingane ze-silicone, izinkezo zezingane ze-silicone,
abicah teethers nobuhlalu abicah, njll China baby amathoyizi wholesale umphakeli.
Le nkampani yasungulwa ngo-2016 futhi itholakala eHuizhou City, eSifundazweni saseGuangdong. Ekuqaleni
, inkampani yayimane nje iyishabhu elincane elinomthengisi ongu-1.
Ukuthuthukiswa kweqembu lebhizinisi kuqhubekile nokukhula, kanye nezinga lenkampani
nayo yandisiwe. Umsebenzisi wenkampani ungumama wengane.
Ngoba uyazi ukuthi ibaluleke kangakanani impilo nokuphepha kwengane, ifilosofi yokuqala yenkampani
njalo ukuthi “ikhwalithi yomkhiqizo impilo”.
Inkampani isungule uhlelo lokuphatha ikhwalithi oluhlangabezana nezidingo zohlelo
lokuphatha ikhwalithi yamazwe ngamazwe. Inkampani ngokuqhubekayo ikhipha izinto
ezintsha eziqanjiwe ngokwemakethe nezidingo zamakhasimende, futhi ihlale igcina ubusha
kanye nokuqanjwa kabusha kwemikhiqizo.
Sineqembu lochwepheshe le-R & D. Singamukela i-OEM ne-OD M.
Ngiyaziqhenya ngokuba yi-China Umkhiqizi Wemikhiqizo Ye-Silicone Esezingeni eliphezulu kanye Nomhlinzeki Wezimpahla Ezithengiswayo
I-Melikey Silicone yigama elingajwayelekile phakathi kwemikhiqizo ehamba phambili ye-silicone e-China. Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-12 embonini yokukhiqiza isikhunta somkhiqizo we-silicone. Sisiza izinkampani ezinkulu nezincane emhlabeni wonke ukuthi zizikhangise ngendlela enomthelela ngamandla ethu ezimbonini zemikhiqizo ye-silicone kanye wholesale silicone products suppliers. Proud to be the leading silicone teether manufacturer, baby toys wholesale suppliers.
Sisebenzisa izinto zokwakha ze-silicone zebanga lokudla ezisezingeni eliphezulu ukwenza imikhiqizo yethu ye-silicone yengane ethengiswayo ( i- silicone teether wholesale,ubuhlalu be,amasethi okuphakela izingane amasethi ewholesale, wholesale yesitsha se,silicone plate wholesale,silicone bib wholesale,silicone cup wholesale , namathoyizi ezingane athengiswayo ) .
Iminyaka yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza isivumela ukuthi siphathe kalula lonke uchungechunge lokuhlinzeka ngokukhiqiza, okuyinzuzo yethu eyingqayizivele njengomkhiqizi ongcono kakhulu we-silicone baby dinnerware kanye namathoyizi amancane we-silicone, kanye nesiqinisekiso esiqinile ngathi sokuhlinzeka ngezinsizakalo zokukhiqiza i-wholesale yemikhiqizo ye-silicone.
Thina ikakhulukazi abakhiqizi wholesale kanye inkambiso . Ukukhiqiza imikhiqizo ngobuningi futhi kunciphisa intengo yeyunithi kanye nezindleko zokuthumela zomkhiqizo. Futhi samukela ama-oda enqwaba amancane nge-MOQ ethile ukuze sisize abathengi bahlole kangcono imikhiqizo yethu futhi bathole impendulo yemakethe ngokushesha. Xhumana nathi namuhla, xoxa nathi ku-inthanethi noma ushayele +86 13480570288 ukuze uqale iphrojekthi yakho.
UMelikey ungumphakeli womkhiqizo we- silicone onesevisi yokwenza ngokwezifiso zasefekthri . Sisekela izinto ezenziwe ngokwezifiso ezifana ne-LOGO yangokwezifiso, ukupakishwa, umbala, njll. Into ngayinye yangokwezifiso inomkhiqizo ohlukile we-MOQ. Ukusuka ekwakhiweni komkhiqizo kuye kokwenza ngendlela oyifisayo, i-Melikey ihlinzeka ngamasevisi angcono kakhulu angezwe kwimikhiqizo yakho. Sisekela ukwenza ngokwezifiso kwayo yonke imikhiqizo, Siyakwamukela kuma-oda we-OEM&ODM!
Sibheka ukubaluleka okukhulu ekuklameni imikhiqizo yethu futhi sibe namalungelo obunikazi. Asibandakanyi noma yiziphi izinkinga zokwephulwa komthetho, sizimisele ukwethula imikhiqizo yoqobo nokwenza imikhiqizo yethu itholakale emhlabeni wonke.
Nakhu okwengeziwe mayelana nomhlinzeki wempahla we-silicone ongcono kakhulu !
I-Silicone Ne-Wood Teether Ring Ngokwezifiso OEM l Mel...
I-Silicone Tableware Isetha Isethi Yezingane Zokondla Isitolo...
I-Baby Silicone Plate Setha Ukondla Ngokwezifiso l Melikey
I-Silicone Cup With Straw Baby Wholesale l Melikey
I-Silicone Baby Placemat Wholesale Factory lMelikey
I-Baby Stacking Toy Silicone Montessori Wholesale
Abicah teething Amathoyizi BPA Mahhala Isitolo esidayisa yonke impahla l Mel ...
Baby Plates Futhi Izitsha BPA Mahhala Isitolo esidayisa yonke impahla Factor ...
Abicah Baby Cup Training Sippy Infant Eco Fri ...
Umkhiqizi Wemikhiqizo Ye-Silicone Ehamba Phambili E-China kanye Nomhlinzeki Wempahla Ethengiswayo Esitolo Esikhulu
Njengomkhiqizi ophezulu wemikhiqizo ye-silicone kanye ne- nomphakeli wemikhiqizo ye -silicone egcwele , sineminyaka engaphezu kwe-12 isipiliyoni sokukhiqiza imikhiqizo ye-silicone, imikhiqizo eyinhloko ihlanganisa i- wholesale silicone teether,ubuhlalu be,wholesale baby tableware, amasethi okuphakela izingane nge-wholesale neminye imikhiqizo ye-silicone. Iminyaka yokuhlangenwe nakho yenze uchungechunge lwethu lwemikhiqizo ye-silicone lwavuthwa kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, sinethimba le-R&D elichwepheshile, futhi sizoba nemikhiqizo ye-silicone eziklanyelwe yona nyanga zonke. Singakunikeza imibono emisha kanye nokuqedwa ngempumelelo kwemiklamo yomkhiqizo wakho.
Njengomphakeli yemikhiqizo ye -silicone kanye nomhlinzeki wempahla we-silicone, samukela insizakalo yangokwezifiso ye-OEM ne-ODM, sithumela umklamo wakho kithi, singenza isampula yangempela zingakapheli izinsuku eziyi-7, sibeke uphawu lwakho kumathoyizi ezingane ezisacathula ,ngobuningi , ubuhlalu be-silicone nezinto zetafula zezingane. , njll. Imboni yethu yemikhiqizo ye-silicone engavamile igxile ekukhiqizeni ngobuningi bemikhiqizo ye-silicone. Noma yimuphi umkhiqizo we-silicone wempahla akuyona inkinga kithi. Kungakhathaliseki ukuthi ungumthengisi noma umkhiqizo, imboni yethu ehamba phambili yemikhiqizo ye-silicone izokusiza ukhulise ibhizinisi lakho ngokushesha ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesevisi ephelele.
Uma ufuna ukuqala ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo ye-silicone, sicela ukhululeke Xhumana nathi! Providing excellent customer service is the eternal pursuit of Melikey Silicone as the best supplier of silicone products!
Sineqembu lochwepheshe le-R & D. Ukusekela Ukwenza Ngokwezifiso, okuhlanganisa ukwakheka komkhiqizo, ilogo, iphakheji, imibala..... Singamukela i-OEM ne-OD M.
Imigqa Yokukhiqiza Eguquguqukayo
imikhiqizo ye-silicone yakho, ekhiqizwe ngobuningi, enezikhathi ezimfushane zokuhola. Konke kuvela eqinisweni lokuthi singabahlinzeki abahamba phambili bemikhiqizo ye-silicone.
Isistimu Yokulawula Ikhwalithi Eqinile
Izinto zokwakha zinikezwa abahlinzeki abavamile. 100% QC impahla eluhlaza. Yonke imikhiqizo ye-silicone iye yahlolwa futhi yakhiqizwa ngobuningi ukuze kuqinisekiswe amazinga aphezulu, futhi umkhiqizo ngamunye kufanele uhlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuba ulungele ukuthunyelwa.
Iminyaka engaphezu kwe-12 yobungcweti
Uchwepheshe embonini ye-silicone ngaphezu kweminyaka eyi-12. I-Melikey Silicone inikeza imibono emisha ethuthukisa ukusebenza kahle nokusebenza kozakwethu emsebenzini.
Ikheli: 2F, i-Factory Building of Andy Company, No.8 Zone, Zhongkai High-tect Zone, Huizhou, Guangdong, China 516000
Ucingo: 86 13480570288
© Copyright - 2010-2022 : Wonke Amalungelo Agodliwe. Umhlahlandlela ,Hot Products ,Ibalazwe ,AMP Ucingo
teething umgexo for baby girl, teether kangcono ngenyanga 4 ubudala , teething yemvelo, abicah ingane teether , abicah teether , abicah teething ubuhlalu ,